» डेढ लाख भ्युजको नजिक तामाङ चलचित्र ‘सेम ताबा म्ही’
डेढ लाख भ्युजको नजिक तामाङ चलचित्र ‘सेम ताबा म्ही’
१५ असार २०७६, आईतवार १३:४९
मकवानपुर, १५ असार । तामाङ समुदायमा चर्चा पाउन सफल तामाङ भाषाको चलचित्र ‘सेम ताबा म्ही’ लाई युट्युबमा सर्वाधिक हेरिएको छ । गत अप्रिल महिनामा सार्वजनिक गरिएको चलचिलाई यो सामाग्री तयार पार्दाको समयमा करिब डेढ लाख पटक हेरिएको छ । चलचित्रलाई १ लाख ३९ हजार भन्दा बढी पटक हेरिएको छ । चलचित्रमा १ हजार १ सयभन्दा बढी लाईक र करिब डेढ सयवटा कमेन्टहरु गरिएका छन् ।
चलचित्रमा दुई प्रेमिको जीवनमा आउने उतारचढाव र गाउँमा भएका ठूला भनिने व्यक्तिहरुले निमुखामाथि गरिएको अन्याय र अत्याचारलाई प्रमुख विषय बनाइएको छ । सुष्मा थिङ, ऋतुराज पाख्रिन, सौरव लामा, गंगा मोक्तान, दिपशिखा लामा, राजकुमार मोक्तान लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको चलचित्रमा राजकुमार मोक्तानकै कथा र निर्देशन रहेको छ । सिदार्थ मोक्तान र राजकुमार मोक्तानको निर्माणमा बनेको चलचित्रलाई विक्रम लामाले छायाँकन र सम्पादन गरेका हुन् । चलचित्रमा ऋतुराज पाख्रिनको स्कृप्ट र संवाद रहेको छ । राजु दोङ तामाङको द्वन्द निर्देशनमा बनेको चलचित्रमा दिपक तामाङको कोरियोग्राफी हेर्न सकिन्छ ।
चलचित्रमा प्रयास दोङको ब्याकग्राउण्ड स्कोर सुन्न सकिन्छ । चलचित्रका गीतहरुमा इन्दिरा गोले, अमृत लामा, शशीकला मोक्तान, निर्मला घिसिङ, बबिता पाख्रिन र प्रयास दोङले आवाज दिएका छन् । हेरौँ चलचित्र–
गोसाईकुण्ड विकास गर्न कैसाङ नुर्पु तामाङको योजना
हेटौँडामा लाग्यो ‘मायाको हाट बजार’
मकवानपुरे कलाकर्मी तथा चलचित्र निर्माता राजेन्द्र गौतमले संभवत नेपालकै सबैभन्दा धेरै कलाकार प्रयोग गर्दै हेटौँडामा ‘मायाको हाट बजार’ लगाएका छन् । गौतमले आफ्नो गित ‘मायाको हाटबजार’ को छायाङ्कन गर्दा हाट बजार नै लगाएका हुन् । नेपालकै सबैभन्दा धेरै कलाकार प्रयोग गरिएर छायाङ्कन गरिएको गित ‘मायाको हाट बजार’ चाँडै बजारमा आउने बताइएको छ ।
गीतको म्यूजिक भिडियोलाई १२ लाख रुपैँया लागत लगाएर छायाङ्न गरिएको गौतमले बताए । गीतको लागि हेलिकप्टरको समेत प्रयोग गरिएको छ । शब्द तथा गायन गौतमकै रहेको गितमा राम विडारीको संगित रहेको छ भने म्युजिक भिडियोमा आशिष–अनुप मानन्धरको कोरियोग्राफी हेर्न पाईन्छ । गितमा सुरज योञ्जन र मोनिका लामिछानेको मुख्य अभिनय रहेको छ भने यसलाई गौतम तथा शितल शर्माले निर्माण गरेका हुन् । गितको ब्यवस्थापन कृष्णकली राजथलाले गरेकी छिन् भने विनोद भट्राईले भिडियो खिचेका हुन् । गीतको विषयमा जानकारी दिँदै गायक तथा निर्माता गौतमले आफुले हेटौँडाबाट पहिलो पटक सबैभन्दा धेरै कोरसको प्रयोग गरि गित निर्माण गरेको बताए । गित अबको केहि समयमानै युट्युब मार्फत सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए । नेपालमा म्युजिक भिडियो निर्माणमा धेरै परिश्रम नगर्ने गरेको सन्र्दभमा आफुहरुले निकै मेहनत तथा श्रोत र साधनको भरपुर प्रयोग गरेर गितको तयारी पुरा गरेको उनले बताए ।
मकवानपुरे ‘मिस्टर डी’ को ‘खाडी’ युट्युब ट्रेण्डिङमा (भिडियो)
‘एउटा छोरा आमाको दुःख र साहुको ऋण तिर्न नसकेर खाडी मुलुकमा छिर्छ । दिनरात बिना तलब आगो जस्तै तातो घाममा काम गरिरहे पनि तलब पाउँदैनन्, यता उनका साथीहरु उनको फेसबुकको सफा तस्बिर हेरेर केटोले धेरै कमायो भन्ने सोच्छन्, अनि आफन्त देखि साथीभाईसम्मले लाखौँ ऋणदेखि आईफोनसम्म माग्न थाल्छन् । तर उसको पिडामा रुने उसको आमा बाहेक कोही हुँदैन’, यो दृश्य हो मकवानपुरे गायक मिस्टर डी (सन्दिप विष्ट) को नयाँ भिडियो ‘खाडी’ को ।
भिडियो हेर्दै जाँदा नेपाली समाजको पिडा र वैदेशिक रोजगारमा खाडी मुलुक जाने युवाको मनोदशाले चरम रुप लिन्छ । अन्तिममा कारुणिक दृश्यसँगै भिडियो सकिन्छ । भिडियोमा त्यस्ता धेरै दृश्य र गीतका शब्दहरु छन् जसले जो कसैको मन दुखाउँछ । यो भिडियोलाई मिस्टर डिको अफिसियल युट्य्ब च्यानलमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । भिडियोलाई युट्युबमा हालेको केही दिनमै ४ लाख ३३ हजार ५ सयभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । यो सामाग्री तयार पार्दाको समयमा यस भिडियो युट्युब ट्रेण्डिङको पाँचौ नम्बरमा छ । म्यूजिक भिडियोमा ४६ हजार भन्दा बढी लाईक र करिब ५ हजार कमेन्टहरु गरिएका छन् ।
मिस्टर डीको यस भिडियोलाई सुरज दाहालले निर्देशन गरेका हुन् । सुमन्ज तामाङको छायाँकन तथा सम्पादनमा तयार भएको भिडियोको कन्सेप्ट र कथा मिस्टर डीले नै लेखेका हुन् । सुमन्ज तामाङ र विश्वास बानियाँले बिटमा सहकार्य गरेका छन् । न्याटिभ स्टुडियो हेटौँडामा रेकर्डिङ गरिएको गीतको पोष्ट प्रोडक्सनको जिम्मा न्याटिभ म्यूजिक ईन्सिटिच्यूट–एनएमआई प्रोडक्सनले लिएको छ । म्यूजिक भिडियोमा सन्दिप विष्ट उर्फ मिस्टर डी, सारदा गिरी, उदेन ठकुरी, शिवप्रसाद दाहाल, दिपक रसाईली, समिर खान, अल्ताव खान, सुशान्त पाण्डे र अनुपजंग सापकोटाको अभिनय रहेको छ ।
मुटुदेखि मुटुसम्म भाग–३ अन्धकार रातको सपना अनि प्रेम
जब जब रात छिप्पिँदै जान्छ तब आफ्नो मान्छेको याद अझ बढ्दै जान्छ । भौगोलिक रुपमा जतिसुकै टाढा भए पनि ,हामी आफ्नो मान्छेको यादमा झोक्राएर बसिरहेका हुन्छौँ एक्लै, निरश अनि अँध्यारो कोठाको चार भित्ताहरुको बिचमा कैदी झँै । चिसो रातको प्रहर परिवर्तनसँगैँ झन्झन याद बढ्दै जान्छ । सायद आकाशको जुनले पनि चिहाउँदो हो हाम्रो निरश मुहारमा अनि खोज्दो हो सधैँ हाम्रो छेवैमा बसेर राति जुनलाई निहाल्ने हाम्रो आफ्नो मान्छे कहाँ छ भनेर । सायद हाम्रो आफ्नो मान्छेलाई हाम्रो वरिपरि नदेख्दा त्यो जुन पनि निराश हुँदो हो , आकाशका ताराहरु पनि चुपचाप शान्तरुपमा झल्मलाउँदो हो । बाँकी हेरौँ भिडियोमा–
चिसो रातको सिरेटोले मुटु बिझाउँदा नरम हातको स्पर्शरुपी मलमपट्टीको याद झन–झन बढ्दै जान्छ । कोल्टे फेर्दै एकातिर फर्कन्छौँ अँहँ निदाउनै सक्दैनौँ हामी । यस्तो बेला हामी सोच्छौँ सायद हाम्रो आफ्नो मान्छे पनि यसरी नै तड्पिरहेको होला । उ पनि हाम्रो न्यानो अंगालोको अभावमा, हाम्रो प्रेमिल स्पर्शको अभावमा बालुवामा परेको माछा झैँ छट्पटाउँदो हो । हामीले एकटक हेरिरहने जुनलाई सायद हाम्रो आफ्नो मान्छेले पनि हेर्दो हो । अनि हामीले जस्तै आभाष गर्दो हो । उनले जुन हेरिहेको आभाष गर्नेबित्तिकै हाम्रो मुहार यो कल्पनाले हर्षित हुन्छ कि सायद हाम्रो आफ्नो मान्छेलाई पनि हाम्रो मुहारको झ–झल्को त्यही जुनमा देखिन्छ होला । जसरी हामी खुला आकाश मुनि उभिएर जुनलाई एकटक हेरिरहेका हुन्छौँ त्यसरी नै हाम्रो आफ्नो मान्छेले पनि त्यही जुनलाई कतै बसेर नियाल्दै होला । यस्तो बेला साँच्चै हामीलाई आफ्नो मान्छेको मुहारमा एकटक नियालेर हेरेको आभाष हुन्छ । आफ्नो मान्छेको निलो समुन्द्रझैँ नयनमा नयन मिलाएर हेर्दा जति रोमाञ्चक अनुभूति हुन्छ त्यति नै रोमाञ्चक अनुभूतिले हामीले मायालु आभाष दिलाईदिन्छ ।
कहिलेकाँही जुनसँगै टोलाएर बोलिन्छ, हाम्रो आफ्नो मान्छेको नाम मात्र लिँदा पनि उनको मायाको आभाषले झुम्छौँ हामी । शान्त रुपमा बहिरहेको हावाले शितलता प्रदान गर्दा आफ्नै मान्छेले छोएको आभाष गर्छौँ हामी । निस्पष्ट अन्धकार रातमा एकोहोरो गुञ्जीरहेको रातको आवाजमा कतै आफ्नै मान्छेको आवाज मिसिएको आभाष हुन्छ हामीलाई अनि घरिघरि कल्पिन्छ मुटु । किन ? आखिर किन म यति धेरै टाढा छु आफ्नो मान्छेबाट ? किन बाध्यताले खडा गरेको यो भौगोलिक दुरीले काँडाले झैँ बिझाउँछ ? किन यादहरुले आँखा र सिरानी भिजाउँछ ? किन यति धेरै याद आउँछ कसैको ? सक्ने भए यी हावाहरुसँगै मायाका आयामहरु अनि मायाका न्यानोपनहरु मिसाएर हाम्रो आफ्नो मान्छेसम्म पुराउँथ्यौँ होला हामी तर विवश यी रातहरुमा मनमै दबिन्छन् हाम्रा भावनाहरु अनि मायालु आभाषहरु । थाहा छैन तपाई के गर्नुहुन्छ यस्तो बेला तर जब जब म आफ्नी मान्छेलाई सम्झन्छु तब म खोज्छु एउटा माध्यम जसले पुराउन सकोस् मेरो मायाका आभाषहरु उनको मुटुले आभाष गर्ने गरी, जसले पुराउन सकोस् मेरा हरेक आँशुका अनुत्तरित प्रश्नहरु मुटुदेखि मुटुसम्म ।
‘मकवानपुरे ठिटो’ ले चर्चा बटुल्दै
मकवानपुरका विभिन्न चर्चित पर्यटकीयस्थलहरुको नाम र त्यहाँका विशेषताहरु समेत समेटेर तयार पारिएको नेपाली लोक गीत ‘मकवानपुरे ठिटो’ चर्चामा छ । नेपाली लोक तथा दोहोरी गीत संगीतको क्षेत्रमा पश्चिमी सुगन्ध मिश्रण भएको आरोप लागिरहेको समयमा मकवानपुरे युवा सर्जक छिरिङ दोर्जे लामाले आफ्नै कला सँस्कृति र मौलिकताको जगेर्ना गर्ने प्रयास गर्दै प्रेम र प्राकृतिक सौन्दर्यलाई गीतमार्फत एउटै मालामा उनेका छन् ।
मकवानपुरको आन्तरिक पर्यटनमा टेवा पुराउने किसिमको ‘मकवानपुरे ठिटो’ बोलको गीतलाई गायिका अर्चना स्याङ्तानको अफिसियल युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । छिरिङकै लय तथा शब्दमा तयार भएको गीतमा जनक लामा, अर्चना स्याङ्तान र सेञ्जी ब्लोनको सुमधुर आवाज समेटिएको छ । मकवानपुर जिल्लाको राक्सिराङ गाउँपालिका वडा नम्बर १ मुङ्ग्रेकोटमा जन्मिएका छिरिङले यस गीतमा मुङ्ग्रेकोटदेखि पकनी र समग्र मकवानपुरको पर्यटकीय स्थललाई समेत चिनाएका छन् । गीतको म्यूजिक भिडियो समेत राम्रो बनेको छ । म्यूजिक भिडियोमा करिश्मा ढकाल, चन्द्र तामाङ, निर्मला मोक्तान र सुवाश तामाङले अभिनय गरेका छन् । गीतको म्यूजिक भिडियोलाई प्रविन थापाले निर्देशन र नमराज घिमिरेले छायाँकन गरेका हुन् । म्यूजिक भिडियोलाई शक्ति प्रज्वल घिमिरेले सम्पादन गरेका छन् । यो सामाग्री तयार पार्दाको समयमा नै गीतको म्यूजिक भिडियोलाई करिब १४ हजार पटक हेरिएको छ ।
महेश बाबुको चलचित्र युट्युब ट्रेण्डिङमा
साउथ सुपरस्टार महेश बाबुको चलचित्र नेपाली युट्युब ट्रेण्डिङमा परेको छ । ‘भरत अने नेनु’ को हिन्दी भर्सन ‘ड्यासिङ सिएम भरत’ यो सामाग्री तयार पार्दाको समयमा युट्युब ट्रेण्डिङको पहिलो नम्बरमा छ ।
चलचित्रमा महेश बाबुसँगै प्रकाश राज, सरथ कुमार, रवि शंकर, सितारा लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । यो सामाग्री तयार पार्दाको समयमा चलचित्रलाई ८ करोड ४८ लाख ५ हजारभन्दा बढी पटक हेरिएको छ । चलचित्रमा १ लाख ६१ हजार लाईक र ७ हजार डिसलाईकहरु गरिएका छन् । चलचित्रमा ७ हजारभन्दा बढी कमेन्टहरु गरिएका छन् ।
भोईस किड्स नेपालमा यी ६ प्रतियोगीको आवाजले कोचहरु उत्साहित
द भोईस किड्स नेपालमा कोचलाई चकित पारेका उत्कृष्ट ६ आवाज
कोचहरुको रोजाईमा ईप्सीचुङ चाम्लिङको आवाज (Ipsichung Chamling)
चर्चामा भोईस किड्सका सुप्रिम मल्ल ठकुरी (Suprim Malla Thakuri)